Iindaba -I-4 ye-China International Tea Expo ebibanjelwe eHangzhou
Ukusuka nge-21 ukuya kwi-25 kaMeyi, i-China International Tea Expo yabanjwa e-Hangzhou, kwiPhondo lase-Zhejiang.
Umboniso weTea weentsuku ezintlanu, onomxholo othi "iti kunye nehlabathi, uphuhliso ekwabelwana ngalo", uthatha ukukhuthazwa kokuvuselelwa kwamaphandle njengowona mgaqo uphambili, kwaye uthatha ukomeleza uphawu lweti kunye nokukhuthaza ukusetyenziswa kweti njengeyona nto iphambili, ngokubanzi ibonisa impumelelo yophuhliso, iintlobo ezintsha, ubuchwepheshe obutsha kunye neendlela ezintsha zeshishini laseTshayina, elinamashishini angaphezu kwe-1500 kunye nabathengi abangaphezulu kwama-4000 abathathe inxaxheba. Ngexesha lomboniso weti, kuzakubakho intlanganiso yotshintshiselwano malunga nokubongwa kwemibongo yeti yaseTshayina, iQonga leNgqungquthela yaMazwe ngaMazwe ngeti kwiWest Lake kunye nomsitho ophambili wosuku lweti yowe-2021 e-China, iQonga leSine kuphuhliso lwangoku Inkcubeko yeti yaseTshayina, kunye neNkomfa yoPhuhliso lwezoKhenketho kwiDolophu yaseKapa ka-2021.
I-China yidolophu yeti. Iti idityaniswe ngokunzulu kubomi baseTshayina kwaye iye yaba yinto ebalulekileyo yokufumana ilifa kwinkcubeko yamaTshayina. IZiko loNxibelelwano leNkcubeko kwi-China le-China, njengefestile ebalulekileyo yotshintshiselwano kunye nokusasazwa kwamazwe angaphandle, lithatha ilifa kunye nokusasaza inkcubeko yemveli yase-China njengenjongo yayo, ikhuthaza kwaye ikhuthaza inkcubeko yeti kwihlabathi, kwaye ibonakalise inkcubeko yeti yase-China. kwi-UNESCO, ngakumbi kutshintshiselwano lwenkcubeko namanye amazwe emhlabeni, kusetyenziswa iti njengophakathi, ukwenza abahlobo ngeti, ukwenza abahlobo ngeti, kunye nokukhuthaza urhwebo ngeti, iti yamaTshayina iye yaba ngumthunywa onobuhlobo kunye nekhadi elitsha unxibelelwano lwenkcubeko kwihlabathi. Kwixesha elizayo, iZiko loNxibelelwano leNkcubeko lase-China liya komeleza unxibelelwano kunye notshintshiselwano lwenkcubeko yeti namanye amazwe kwihlabathi, igalelo kwinkcubeko yeti yase-China eya phesheya, yabelane nehlabathi ngobuhle benkcubeko ye-China ebanzi nanzulu, kwaye idlulisele Ihlabathi uluvo loxolo "olukhokelwa yiti" yelizwe elineminyaka eliwaka ubudala, ukwenzela ukuba kwenziwe ishishini leti yakudala elinembali yeminyaka eliwaka ngonaphakade lihlaziyeke kwaye linuka kamnandi.
I-China International Tea Expo sisiganeko seshishini leti ephezulu eTshayina. Ukusukela nge-Tea Expo yokuqala ngo-2017, inani elipheleleyo labathathi-nxaxheba lidlulile kuma-400000, inani labathengi abaqeqeshiweyo lifikelele ngaphezulu kwe-9600, kunye ne-33000 yeemveliso zeti (kubandakanya ne-West Lake Longjing iti eluhlaza, i-Wuyishan White Tea-jierong tea bag mateiral njl. ) zihlanganisiwe. Ikhuthaze ngokufanelekileyo ukumiswa kwemveliso kunye nentengiso, ukukhuthaza uphawu kunye notshintshiselwano ngeenkonzo, ngengeniso epheleleyo engaphezu kwe-13 yezigidigidi ze-yuan.